Ministry of Rail Transportation အစသို့
မြန်မာ့မီရထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါ website Link တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းမှ ၀န်ထမ်းများနှင့် သင်တန်းသားများမှ ရေးသားတင်ပြပါသည်။
" A life among the trains "
1/ Life is ...... Butatrain
that runs straight forward
2/ Life is ....... Butatrain
that passedagreen grove (or)
a cool and clam and peaceful brook (or else)
a vast golden paddy field ( If not)
a dusty village (but then)
An urban sleeping
3/ Life is ....... Butatrain
that cannot meet atapoint
Under the wheels of the train
on parallel railroads.
4/ Life is ...... Butavariety up train
along the track of life cylce .
5/ Life is ..... Butatrain
Onatrack of its ups and downs
A well-furnished special express train
An ordinary train in ordinary life
A freight train in the struggle of life
A mail train with variety of tasks
A local train within commuting distance
A train with heavy burden
Of all walks of life .........../
6/ Actually ,
Life is ......... Butacolourful stage
A life among the trains
A train among the lives
A variety of train
Until the end of the life cycle.
composed by U Zayar lwin
(Assistant Lecturer) Railways Department
translated by U than tun (Sagaing)
မိဘများ သားသမီးများကို အမှန်တကယ်ချစ်ရင်ဖြင့် အထုတ်ကိုပေးခြင်းထက် အလုပ်ကိုပေးခြင်းဖြင့် ချစ်ရာရောက်ကြပါစေဖို့
ယနေ့ခေတ်မှာ ပညာခေတ်ဖြစ်လာပြီး မိဘများက သားသမီးများကို ဥစ္စာအမွေပေးခဲ့သော်ုငားလည်း ကုဋေ ၈၀ သူဌေးသားဇာတ်ထုတ်လို အနာဂတ်မသေချာရှိတတ်ပါတယ်။ ခေတ်မီသူတိုင်း နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အမီလိုက်နေကြရာ အိုင်တီနည်းပညာနည်းတူ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဌဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်လာပါတယ်။
ထို့အတူ အာဆီယံ (၁၀) နိုင်ငံရဲ့ ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုအားမှာလည်း အရှိန်အဟုန်မြင့်တိုးတက်လာရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံအချင်းချင်း (Free Flow of Skill Laboru)ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများလွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကဏ္ဍ ပါဝင်လာတော့မည်ဖြစ်ရာ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၌လုပ်သားပေါင်းမြောက်မြားစွာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပွင့်လန်းလာတော့ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအခါမြန်မာနိုင်ငံရှိ လူငယ်အများစုမှ အိုင်တီးနည်းပညာနယ်ပယ်၌လည်းကျောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၌လည်းကောင်း အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလန်းများပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဖြစ်ရာအတတ်ပညာများပြည့်စုံနေရေးသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရမည့်တာဝန်များ မိဘများ၏ အဓိက တာဝန်ဖြစ်လာပါတော့သည်။ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးတွင် ယာဉ်မောင်းသူများမှာ အရေးပါလာမည်ဖြစ် ပြီးကျွမ်းကျင် ယာဉ်မောင်းဝန်ထမ်းများသည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရေးကြီးဝန်ထမ်းများဖြစ်လာမည်ဖြစ်ရာ စိတ်ချရသော ယာဉ်မောင်း၊ ကျွမ်းကျင်သော ယာဉ်မောင်းများနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာသော နိုင်ငံကြီးသားပီသသည့် ယာဉ်မောင်း များမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက အာဆီယံနို င်ငံများအတွင်း၌ပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပွင့်လန်းလာကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုလိုအပ်ချက်များကို ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းမှလည်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်။ စည်းကမ်း စနစ်ကောင်းမွန်ပြီး အတတ်ပညာများကို စိတ်စေတနာအပြည့်အ၀နဲ့ တတ်မြောက်အောင်သင်ကြားပေးမည့် ၀ါရင့်ကျွမ်းကျင် ဆရာများ လည်း ပြည့်စုံစွာရှိတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ပြပစ္စည်းများ၊ ခေတ်မီယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထားသော E.F.I အင်ဂျင်၊ ပါဝါ စတီယာရင်နှင့်အော်တိုဂီယာများအကြောင်းလည်း ဂဃဏန သိအောင်သင်ကြားပေးမဲ့နေရာတစ်နေရာတလည်းဖြစ်ပါတယ်။
“ခ” လိုင်စင်ရရှိရေးကိုလည်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှယာဉ်စည်းကမ်း/လမ်းစည်းကမ်းများ စာတွေ့လက်တွေ့ လာရောက်စစ်ဆေးပြီး သင်လိုင်စင် ၃လပြည့်ချိန်၌ “ခ” လိုင်စင်လက်ဝယ်ရရှိရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာပြည်တွင်း၌လည်း ကျွမ်းကျင် လုပ်သားမျးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လို့ မိဘများအနေနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးများ ဘ၀နောင်ရေး စိတ်အေး ရအောင်အတတ်ပညာတစ်ခုပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းကိုလက်မလွှတ်မိစေဖို့အထုတ်ကိုပေးခြင်းထက်အလုပ်ကိုပေးခြင်းကသာ နောင်ရေး ခိုင်မာစိတ်အေးရမှာဖြစ်ပါကြောင်း စေတနာကောင်းနဲ့ကြေကြမောင်းခတ်လိုက်ပါတယ်။
ဖုန်း-၀၆၄-၂၃၅၄၅ (လိုင်းခွဲ ၁၁၃)/ ၀၉-၄၉၂၉၃၇၃၇